Posted by Tranquillus | Mar 7, 2020 | vokatra
Raha tsy manana fahazarana mazava ianao amin'ny fikarakarana ny mailakao, dia mety ho lasa loharanon'ny fotoana lany haingana izy ireo. Amin'ny lafiny iray, raha manao izay ilaina eo amin'ny sehatry ny fandaminana ianao mba tsy hamela ny tenanao ho tototry ny mailaka am-polony tsy voavaky. Avy eo dia azonao atao ny manafaka ny sainao amin'izay mety ho diso a namany Sary manan-danja. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia misy fomba fanao voaporofo maromaro voatanisa. Amin'ny alàlan'ny fananganana azy ireo dia tsy isalasalana fa ho afaka mitantana ny boaty mailakao amin'ny fomba milamina kokoa ianao.
Manasoka feo mailaka ho azy na amin'ny alàlan'ny takelaka natokana ho azy na amin'ny alàlan-tsofina.
Ity no karazana fomba ahafahanao mamily haingana ny mailaka alohan'ny zava-dehibe. Azonao atao ny misafidy ny hanasokajiana ny mailaka amin'ny alàlan'ny lohahevitra, amin'ny alàlan'ny lohahevitra, amin'ny fe-potoana. Ny zava-dehibe dia ny manararaotra ny rehetra ny endri-javatra ao amin'ny boaty mailakao hitantanana ny mailaka amin'ny fomba fiasa feno. Raha vantany vao namorona lahatahiry misy lahatahiry sy zana-tsipika arakaraka ny maody fandaminana mety aminao. Ny hafatra tsirairay dia hanana ny toerany ao anaty boaty mailakao toa ny rakitra taratasy tsirairay eo amin'ny latabatrao. Noho izany, raha vao lasa ny fotoana hikarakarana ny mailakao dia afaka mifantoka 100% amin'ny sisa amin'ny asanao ianao.
Manomàna fotoana manokana hametrahana ny mailaka
Mazava ho azy fa tsy maintsy mijanona ho fandraisana andraikitra ianao ary afaka mandefa hafatra miandry valiny haingana avy aminao. Mandritra ny ambiny, planino ny fotoana (s) ilaina indrindra, mba hiatrehana ireo mailaka tsy miova. Atombohy amin'ny fanomanana ireo singa rehetra ilaina amin'ny fanodinana ny asanao. Rakitra taratasy, stapler, mpanonta, ny zavatra rehetra dia tsy maintsy ilaina hahamora ny fifantohana tanteraka. Tsy maninona rehefa misafidy anao. Ankehitriny raha voalamina toy ny foibe famandrihana ny paositra ny posinao, dia azonao atao ny manamboatra mailaka milamina miaraka amin'ny fahombiazana sy hafainganana.
Diovy ny boaty mailakao amin'ny famafana ny takelaka rehetra tsy ilaina
Voafehin'ny pejin'ny mpanao gazety na dokambarotra ve ny boaty mailaka anao? Tandremo hanesorana ny boaty mailaka anao ireo lahatahiry rehetra izay toa ny spam ny zava-drehetra. Tsy maintsy arisinao amin'ny fomba maimaim-poana ireo lisitra mailaka ireo izay tsy mitondra anao mivaingana ary mety ho lasa mahery vaika kokoa. Afaka mampiasa fitaovana toy ny Cleanhio izay Unroll Me Ataovy ny ilaina amin'ny kitapo vitsivitsy. Raha tsy maka maraina ianao dia hanampy anao ity karazana vahaolana ity hamaranana ity fandotoana nomerika ity. Misy mailaka an'arivony azo zahana haingana.
Manangàna valiny mandeha ho azy
Vetivety foana ianao dia hanao fialan-tsasatra lava. Ny antsipirihany tsy tokony hohadinoina, mamadika ny valiny automatique amin'ny mailakao. Zava-dehibe izany ka ny olona rehetra izay mifanerasera amina matihanina aminao amin'ny alàlan'ny mailaka dia nampahafantarina tsara ny tsy fahatongavanao. Maro ny tsy fifankahazoana azo atao rehefa misy mpanjifa na mpamatsy very ny faharetana, satria mijanona ho tsy misy valiny ireo hafatra ireo. Izany dia azo sorohina mora foana miaraka amina hafatra fohy izay halefa mandeha ho azy mandritra ny fialan-tsasatrao. Mila aseho fotsiny ny datin'ny fiverenanao amin'ny fialan-tsasatra ary maninona fa tsy ny mailaky ny mpiara-miasa raha ilaina izany.
Manamaivana ny isan'ny mailaka alefao
Mampiasa mailaka amin'ny alàlan'ny mailaka alefa any amin'ny tarika karbônina (CC) ary ny kapila karbonika tsy hita (CCI) dia afaka mamokatra fifanakalozana haingana tsy misy farany. Ny olona izay tokony ho nandray ny hafatrao ho fampahafantarana fotsiny, dia mila fanazava izao. Ny sasany dia manontany tena hoe maninona no nahazoany an'io hafatra io izy ary noheveriny ho fandaniam-potoana fotsiny izany. Rehefa manao safidy ianao hametraka olona ao anaty tadidy, dia ho azo antoka fa manan-danja ny safidinao. Ny hafatra alefa any amin'izay rehetra amin'ny lafiny rehetra dia tokony hialàna.
Aza adino fa ny mailaka dia afaka manana sanda ara-dalàna
Raha mbola azo atao dia mitazona ny mailaka rehetra izy ireo, manana ny herin'ny porofo izy ireo, indrindra ny tribonaly indostria. Hafatra elektronika raha voamarina miaraka amin'ny lanjany ara-dalàna toy ny taratasy nosoratanao amin'ny tanana ianao. Saingy tandremo, na dia hafatra tsotra aza nandefa nefa tsy nieritreritra amin'ny mpiara-miasa na amin'ny mpanjifa iray dia mety hisy fiantraikany lehibe. Raha manaporofo ny mpanjifa iray dia manana ny fanohanana ny mailaka, tsy nanaja ny fanekenao amin'ny resaka fandefasana na hafa ianao. Tsy maintsy mizaka ny vokatr'ilay orinasao ianao sy ho an'ny tenanao. Amin'ireo fifandirana ara-barotra toy ny an'ny tribonaly indostrialy, ny porofo dia voalaza fa "afaka". Izany hoe ilay mpitsara no hanapa-kevitra ary tsara kokoa ny nanasokajiana tamim-pitandremana ireo mailaka nalefany fa tsy nampiditra azy ireo tao anaty fako.
Mahaiza mitantana amim-pahombiazana May 17th, 2020Tranquillus
Teo alohaInona no ilainao ho fantatra momba ny fialam-boly mitokana
manarakaManomàna hafatra tsy misy alalana ho an'ny fialan-tsasatra